Indlela yokuba yi-CCNP Wireless Certified Professional - ITS Tech School
I-CCNP engenazintambo eziqinisekisiwe zobuchwepheshe
Iyini isitifiketi se-CCNP Wireless?
Isinyathelo i-1: Bheka ngephutha ukuthi ufanelekile ukuthatha isitifiketi
Isinyathelo 2: Ukuthola isitifiketi
Isinyathelo 3: Ukuvuselela isitifikedi
I-Cisco inikeza izitifiketi eziningi zezobuchwepheshe ezinjengezo CCNA futhi CCNP. Kusukela CCNP lizinga elingaphezulu kune CCNA, kuphazamiseka kakhulu futhi kucela ulwazi oluvelele nokusebenza. Uma kufanele kube khona isitifiketi esingenantambo, izindinganiso zokuxhumana ezingenazintambo kanye ne-hypothesis zisetshenziselwa ukwakhiwa ukusungulwa kwabachwepheshe ukuze bahlangabezane nezidingo zokuxhumana ezingenazintambo. Ngokufunda kuyenyuka ngokusebenzisa isitifiketi, ochwepheshe bangakwazi ukwenza kahle ukuhumusha kwebhizinisi kudinga ukufakwa ukusebenza. Sinike manje ithuba lokubona isitifiketi se-CCNP esingenantambo ngokuningiliziwe.
Isitifiketi se-Cisco Certified Network Professional Wireless sigxila ezintweni ezingenazintambo zokuxhumana ezingenazintambo ngokusebenzisa izinto ze-Cisco. Wayejwayele ku-2009 ngokucabangela izidingo zebhizinisi eliguqukayo. Isembozo sesitifiketi sokudlulisa, ukuhlela, ukuvikela nokuphenya amanethiwekhi angenazintambo ze-Cisco.
I-CCNP engenantambo isakaze izifundo ezifana nokuqondisa izifundo zesayithi, ukuthola izidingo zokuthenga amaklayenti, ukuqhuba amanethiwekhi angenantambo, ukusekela isisekelo se-LAN esingenantambo kanye namanye amaphuzu wombuso angavamile. Abaqeqeshiwe abaneziqinisekiso ezibonakalayo emhlabeni jikelele banamandla aphethwe-ngokubandakanyeka ngezinsimbi ezingenazintambo zeCisco. Lesi yisitifiketi esihle kunazo zonke zezingcweti ezifuna imisebenzi engcono kanye nenkokhelo ephakeme. Ukunikezwa ngezansi kuyindlela yokuthatha isitifiketi.
Bona futhi :CCNA Certification - Umhlahlandlela ophelele
Abaqeqeshi bezingcingo ezingenantambo abafana nabadwebi benethiwekhi, abaphathi benethiwekhi kanye nochwepheshe bezinethiwekhi bangathatha isitifiketi ukuthuthukisa ukuqonda kwabo kanye namakhono. Abantu abafuna lezi zikhundla bangakhetha lokhu ukuze bavuseleleke ngokufanelekayo ukuvuleka okuhlobene nomsebenzi. Kuhlolwe ukuthi abasebenzi bazokhula ngama-20% phakathi kweminyaka engu-2008 no-2018. Izinga lokuthuthukiswa kwebhizinisi lithembeke ukuba lizungeze i-30 okwenza kube inzuzo kubaqeqeshi kule nsimu. Ikusasa libona ithini lokuvuleka komsebenzi elizayo uma lizuza isitifiketi.
Indoda edingeka ukuthola isiqiniseko kufanele ibe ne-CCNA Wireless noma i-CCIE isitifiketi. Lokhu kusho ukuzuza isitifiketi esingenazintambo ze-CCNP, kufanele athathe kuqala i-Cisco Certified Network Associate Wireless noma I-Cisco Certified Workwork Certification certification kunoma iyiphi ithrekhi.
Kunezivivinyo ezine zesitifiketi esingenantambo. Lezi yi-642-731 CUWSS, i-642-741 IUWVN, i-642-746 IUWMS ne-642-736 IAUWS. Isivivinyo ngasinye siqukethe i-50 kumakheli we-60 okumelwe aqedwe ngehora nengxenye. Kuzo zonke izivivinyo, kukhona inkambo yokuqeqesha kwezinsuku ze-5. Lezi zifundo zilungiselela umncintiswano ukusetha inethiwekhi engenazintambo, zibandakanya izakhi ezahlukene ezifana ne-Voice Over Wireless Local Network Network, izinzuzo zokuphathekayo futhi uvikele inethiwekhi ngokumelene nezingozi ezicatshangelwayo.
Isitifiketi ngasinye somsebenzi esihlinzekwa ngu Cisco uhlala lukhulu kuze kube yisikhathi seminyaka emithathu nje. Ngemuva kwalesi sikhathi, isitifiketi siphelelwa yisikhathi futhi umnikazi we-testament akaphinde aqeqeshekele izinzuzo zobuchwepheshe. Kufanele afake isicelo sokuqinisekiswa kabusha ukuze aqhubeke ewazisa. Unezinketho ezine zokuphequlula. Kufanele adlule noma yikuphi ukuhlolwa kwezinga lobuchwepheshe ngaphambi kokuba isitifiketi siguqule noma kufanele sidlule noma yikuphi kokuhlolwa kwe-CCIE yamanje. Okunye okwesithathu kudlula ilungelo okwamanje elinikeziwe I-Cisco Certified Design Expert (CCDE) eyabhalwa phansi noma ephansi izivivinyo zomhlaba. Okukhethwa kokugcina ukudlula umhlangano webhodi nokudingwa kocwaningo lweCisco Certified Architect (CCAr) isitifiketi esimqinisekisa kabusha zonke izitifiketi ezingeni eliphansi.
I-CCNP engenantambo isisitifiketi esikhulu esilinganiselwe esidinga ukuthi abancintisana abathinte ukuhlolwa kufanele babe nesisekelo esihle ensimini. Lokhu kubandakanya kokubili ukufunda okucatshangelwayo nokusebenza ngokubheka iqiniso lokuthi uma sekuqinisekisiwe, bazosebenza esimweni sokuxhumana seqiniso. Lokhu kuzobekwa ukuhlola noma yikuphi ikhono lokuzikhandla abanalo ngokusebenzisa isitifiketi.
Bona futhi :Kungani Izinkampani Zifuna Abaqeqeshi Bezokuphepha Nezikhangiso Zakwa-CEH Eziqinisekisiwe?
Izinto ezibalulekile Okwazi Ngayo ngeCCNP Ukubambisana Kwezitifiketi